Maxamed Mursal “Guddoonka Baarlamaanka marna kuma fakarin in muddo kororsi ay sameeyaan, xaqna uma laha in ay ku fakaraan” – Kalfadhi
Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkan dib-u-dhigay furitaanka Kalfadhigii 7-aad ee Baarlamaanka, kaddib markii cudurka COVID-19 uu kusii baahay dalka.
Kalfadhiga ayaa la filayay in uu furmo 20-kii bishan. Qaar kamid ah xisbiyadda siyaasadda ee dalka ayaa dib-u-dhigista kalfadhiga ku micneeyay bilowga muddo kororsi, iyadoo dhawaanadan xisbiyadda ay hadal hayeen in dowladda ay dooneyso in muddo kororsi ay sameeyso, iyada oo ku andocooneysa cudurka COVID-19.
Mudane Maxamed Mursal, ayaa carabka ku adkeeyay in Baarlamaanka uusan u diyaar-garoobin in xil kororsi uu sameeyo, taasi bedelkeeda waxaa uu u diyaar-garoobayaa sidii loo de-dejin lahaa shuruucda horyaalla oo ay kamid yihiin sharciga axsaabta siyaasadda iyo dhammeystirka sharciga doorashooyinka oo hadda ku maqan guddiga.
“Annaga waxaan qorsheyneynaa ka Baarlamaaan ahaan in wadanka doorasho ay ka dhacdo. Guddoonka marna kuma fakarin in muddo kororsi ay sameyaan, xaqna uma lihin in aan ka fakarno”, ayuu sii raaciyay.